Levonorgestrel အမှုန့် (797-63-7) hplc≥98% Buy | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင် / အမျိုးသမီးအသုံးပြုခြင်း / Levonorgestrel အမှုန့်
SKU: 797-63-7. Categories: အမျိုးသမီးအသုံးပြုခြင်း, ဟော်မုန်းမြှင့်တင်ခြင်းလိင်
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Levonorgestrel မှုန့်အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့် (797-63-7) မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Levonorgestrel အမှုန့် ကသုက်ပိုးများကကြက်ဥ၏အ Ovary သို့မဟုတ်တားဆီး fertilization တစ်ဦးထံမှကြက်ဥ (အထီးမျိုးပွားဆဲလ်) ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်တယ်, ဖြူပုံဆောင်ခဲအမှုန့်ဒြပ် progestational ဟော်မုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစတစ်ဦးကိုယ်ဝန်ရှိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့သားအိမ် (အမိဝမ်းထဲ) ၏နံရံပြောင်းလဲနေတဲ့အားဖြင့်အလုပ်လုပ်စေနိုင်သည်။ Levonorgestrel အဓိကအားဖြင့်ကိုယ်ဝန်တားဆီးဖို့အသုံးပြုကများသောအားဖြင့်တစ်ဦး racemic အရောအနှော (Norgestrel, 6533-00-2) တွင်ထောက်ပံ့နေသည်။
Levonorgestrel အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Levonorgestrel အမှုန့်
နာမ်: 13-ethyl-17-alpha-ethynyl-17-beta-hydroxy-4-gonen-3-one ;13-ethyl-17-alpha-ethynylgon-4-en-17-beta-ol-3-one ;13-ethyl-17-hydroxy-19-dinor-17-alpha-pregn-4-en-20-yn-3-on(+)-1 ;17-alpha-ethinyl-13-beta-ethyl-17-beta-hydroxy-4-estren-3-one ;17-beta-hydroxy-18-methyl-19-nor-17-alpha-pregn-4-en-20-yn-3-one ;17-ethynyl-18-methyl-19-nortestosteron ;17-ethynyl-18-methyl-19-nortestosterone ;18-methyl-17-alpha-ethynyl-19-nortestosterone
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 206 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ရေဆူမှတ်: 459.1 mmHg မှာကို C ° 760
Flash ကိုပွိုင့်: 195.4 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အသေးစိတ်အချက်အလက်များ။ ကုန်ကြမ်း Levonorgestrel အမှုန့်ကိုသိရန်အဘို့အ
အနိမ့်ဆေးများမှာ Levonorgestrel အမှုန့် 100-250μgကနေအထိရရှိနိုင် monophasic ဆေးများနှင့်50μg / 75μg / 125μg၏ triphasic ဆေးများနှင့်အတူတားဆေး၏ monophasicand triphasicformulations အတွက်အသုံးပြုသည်။ အဲဒီဖော်မြူလာထဲမှာအီစထိုဂျင် ethinylestradiol နှင့်အတူပေါင်းစပ်ထားသည်။
30μg၏အလွန်နိမ့်နေ့စဉ်ဆေးထိုးမှာ Levonorgestrel အမှုန့်အချို့ progestogen သာ pillformulations အတွက်အသုံးပြုသည်။
Levonorgestrel အမှုန့်အီစရိုဂျင်ပါဝင်သောတစ်ဦးပေါင်းစပ် Yuzpe regimen ၌၎င်း, တစ်ဦး Levonorgestrel ကုန်ကြမ်းအမှုန့်သာနည်းလမ်းအဖြစ်နှစ်ဦးစလုံး, အရေးပေါ်တားဆေးဆေးပြား (ECPs) တွင်အသုံးပြုသည်။ အဆိုပါ Levonorgestrel အမှုန့်သာနည်းလမ်းအဖြစ်နှောင်းပိုင်းတွင် 1.5 နာရီ (0.75 ရက်ပေါင်း) အဖြစ်စတင်ကြောင်းညွှန်ပြမီလီဂရမ် (ကတစ်ခုတည်းထိုးအဖြစ်သို့မဟုတ်ဆိတ်ကွယ်ရာနှစ်ခု 12 မီလီဂရမ်ဆေးများ3နာရီကဲ့သို့) တဦးတည်းလေ့လာမှုနှင့်အတူအကာအကွယ်မဲ့လိင်ဆက်ဆံမှု၏ 120 ရက်အတွင်းယူ Levonorgestrel ကုန်ကြမ်းအမှုန့်5ကိုအသုံးပြုသည် လိင်ဆက်ဆံမှုပြီးနောက်ထိရောက်သောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ဦး progestogen-သာအရေးပေါ်တားဆေးဆေးလုံးအဖြစ် Levonorgestrel ကုန်ကြမ်းအမှုန့်၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၏အဓိကယန္တရားသားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ mucus.FIGO ၏မျိုးဥထွက်ခြင်းနှင့် thickened ၏တားစီးနေဖြင့် fertilization ကာကွယ်တားဆီးဖို့, မီးယပ်နှင့်သားဖွား၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့ချုပ် (FIGO) အရကြောင်းဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်: " အထောက်အထား၏သုံးသပ်ချက်ကို LNG [levonorgestreol] ECPs တစ်ဦးဓာတ်မြေသြဇာကြက်ဥ၏ implantation တားဆီးမနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ implantation အပေါ်ဘာသာစကား LNG ECP ထုတ်ကုန်တံဆိပ်ကပ်ခြင်းတွင်ထည့်သွင်းမရသင့်ပါတယ်။ "နိုဝင်ဘာလ 2013, ဥရောပဆေးဝါးများအေဂျင်စီ (EMA) ခုနှစ်တွင်ကဓာတ်မြေသြဇာကြက်ဥ၏ implantation တားဆီးလို့မရဘူးဟုတံဆိပ်တစ်ခုအပြောင်းအလဲအတည်ပြုခဲ့သည်။ တခြားလေ့လာမှုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးဖြစ်အထောက်အထားရှာပါ။ ဒါဟာအရေးပေါ်ဓတေား implantation ထိခိုက်စေသောမဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဒါဟာလုံးဝ Post-fertilization အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေထုတ်ပယ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ "လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့တားဆေးထိရောက်မှု 2013 ကီလိုဂရမ် [75 ပေါင်] သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုအလေးချိန်အမျိုးသမီးလျှော့ချနှင့် Levonorgestrel အမှုန့်အလေးချိန်သောမိန်းမတို့အတွက်ထိရောက်သောမဟုတ်ခဲ့ခံခဲ့ရသည်: နိုဝင်ဘာလ 165 ခုနှစ်, EMA ကိုလည်းဟရား Pharma ဆေးဝါးရဲ့ NorLevo ဟုများအတွက်တံဆိပ်တစ်ခုပြောင်းလဲမှုအတည်ပြု 80 ကီလိုဂရမ်ထက်ပို။ "နိုဝင်ဘာလ 2013 နှင့်ဇန်နဝါရီလ 2014 မှာ FDA ကနှင့် EMA သူတို့တိုးမြှင့်အလေးချိန်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း (BMI) အရေးပေါ် contraceptives ၏ထိရောက်မှုကိုလျှော့ချခြင်းရှိမရှိပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်
Levonorgestrel ကုန်ကြမ်းအမှုန့်အားလုံးဆေးဝါးမှအတူတူပင်ဖြစ်ပါသည်, အခြို့မလိုချင်တဲ့သက်ရောက်မှု Levonorgestrel အမှုန့်များအသုံးပြုခြင်းကနေဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ အမြဲတမ်းအသုံးမပြုခင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကြံဉာဏ်ဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။ (1.5% သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်) လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုများတွင် 10 မီလီဂရမ် Levonorgestrel ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကိုယူပြီး၏အလွန်ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးပါဝင်သည်: အန်, အသင်းအဖွဲ့ချုပ်, မူးဝြေခင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, ပျို့, စိတ်ကျရောဂါ, ဝက်ခြံ, ကိုယ်အလေးချိန်, ဝမ်းဗိုက်နာကျင်မှု HDL လျှော့ချ, ရင်သားရောင်ရမ်းခြင်း , သားအိမ်နာကျင်မှုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်ပြီးနောက်, ရာသီ, မိုးသည်းထန်စွာရာသီ, သားအိမ်သွေးထွက်ခြင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်, amenorrhea နှောင့်နှေး။ အသည်းနှင့်ကျောက်ကပ်ကမောက်ကမဖြစ်မှု, ရင်သားကင်ဆာထုဆွဲထားခဲ့ကြ .; (% 1 မှ 10% တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်) ဘုံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဝမ်းလျှော, အန်ခြင်း, နာကျင်ရာသီပါဝင်သည်; ဤအဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေအများအားဖြင့် 48 နာရီအတွင်းပျောက်ကွယ်သွားပါကပုံမှန်ပဋိသန္ဓေတားဆေးအဖြစ်လာမယ့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောတားဆေးအစီအမံ premenstrual ဆေးယူခံရဖို့လို့မရပါဘူး။ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူအမြိုးသမီး (ကြောင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါကြောင့်ရှုပ်ထွေးဖို့) မယူသင့်ပါတယ်။
Levonorgestrel အမှုန့် (သို့မဟုတ်ဌ-norgestrel သို့မဟုတ် D-norgestrel) ဒါဟာအီသနောနှင့် methylene ကလိုရိုက်အတွက်အနည်းငယ်သာပျော်ဝင်, chloroform အတွက်ပျော်ဝင်, ရေအတွက်လက်တွေ့ကျကျသည်အရည်ပျော်တစ်ဦးဒုတိယမျိုးဆက်ဒြပ် progestogen ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း၏ progestogenic လှုပ်ရှားမှုရန်, Levonorgestrel ကုန်ကြမ်းအမှုန့် antigonadotropic သက်ရောက်မှုရှိပြီး, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများနှစ်ဦးစလုံးအတွက်မွေးဖွားနှင့် gonadal လိင်ဟော်မုန်းထုတ်လုပ်မှုဖိနှိပ်နိုင်က pituitary gland ကနေ gonadotrophin လွှတ်ပေးရန် supressing အားဖြင့်မျိုးဥထွက်တားစီးဖို့ကိုလုပ်ဆောင်ကြသည်။ ဤသည် follicles ဟော်မုန်း (FSH) ကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့် follicles ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်မျိုးဥထွက်၏နောက်ဆက်တွဲတားစီးနှင့်အတူဟော်မုန်း (LH) luteinizing ၏နှိမ်နင်းအဆင့်ဆင့်အတွက်ရလဒ်များ။ အချို့သောဟော်မုန်း contraceptives, includingcombined ပါးစပ်တားဆေးဆေးပြား, progestogen သာဆေးပြား, အရေးပေါ်တားဆေးဆေးပြား, Intrauterine စနစ်များ, တားဆေး implants နှင့်ဟော်မုန်းအစားထိုးကုထုံးတစ်ခုတက်ကြွစွာပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုပေမယ့်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများဆန့်ကျင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်လို့မရပါဘူး။ ထို့အပြင် D- norethindrone အဖြစ်လူသိများ, Kanok ketone ထားခဲ့တယ်။ ဘာတစ်ခုမှအကောင်းဆုံးရလဒ်တွေကိုရယူလျှင်, သင် 72 နာရီအကြာဒုတိယအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံမှု၏ 12 နာရီအတွင်းတတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးခေါ်ဆောင်သွားနှင့်ရပါမည်။ အဆိုပါဆေးဝါးရှိရာသို့အလျင်အမြန်သူတို့လိင်ဆက်ဆံပြီးနောက်ယူနေကြသည်ကိုပိုမိုထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။
AASraw ထံမှ Levonorgestrel အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို